Fihenam-bidy EPS fanamboarana akora sy orinasa | XiongYe
EPS (Expandable Poly Styrene) dia fitaovana maivana, henjana, vita amin'ny plastika vita amin'ny volon-koditra vita avy amin'ny poti-polystyrene matanjaka. Ny fanitarana dia tratra amin'ny alàlan'ny entona pentana kely dia kely levona ao anaty akora polystyrene mandritra ny famokarana. Miparitaka eo ambanin'ny asan'ny hafanana ny etona, apetraka ho setroka, mba hamorona sela voafono tanteraka amin'ny EPS. Ireo sela ireo dia mitaky in-40 eo ho eo ny haben'ny vakana polistyrena voalohany. Ny vakana EPS avy eo novolavolaina ho endrika mety mifanaraka amin'ny fampiharana azy ireo. Ny vokatra vita amin'ny polystyrene vita amin'ny foamed dia saika misy ny toerana rehetra, ohatra, fitaovana fonosana, insulation, ary kaopy fisotroana foam.
Raw.E grade EPS akora fototra:
E-fenitra kilasy fitaovana dia EPS mahazatra be mpampiasa, mety amin'ny milina fananganana mandeha ho azy, milina mpamorona herinaratra ary fanindry hydraulic mahazatra. Izy io dia fenitra mahazatra amin'ny famolavolana foamed, izay azo alefa amin'ny foamed mba hahatratrarana volon-koditra maivana amin'ny fotoana iray. Amin'ny ankapobeny dia mety kokoa amin'ny vokatra misy tahan'ny 13 g / l na mihoatra izany. Ampiasaina betsaka amin'ny fonosana herinaratra, fitaovana fanamafisam-peo mafana, ary fitsangantsanganana fanjonoana. , Asa-tanana, haingon-trano, fanariana sombin-javatra very sns.
1. Haingam-pandeha haingana:
2. Famaritana fitoviana mahazatra (ny tahan'ny dia ambany noho ny fitaovana P);
3. Fanjifana angovo ambany sy fitsitsiana etona;
4. Fotoana fanasitranana fohy sy fihodinana famolavolana;
5. Ny vokatra dia manana fahotana tsara;
6. Voninkazo malama;
7. Milamina ny habe, avo ny tanjaka, mahery ny fampiharana, ary ny vokatra tsy mora mihena sy mivadika endrika.
kilasy Type Size (mm) Taham-pivelarana (indray mandeha) Application
E naoty E-101 1.30-1.60 70-90 Fonosana seramika elektrika, boaty fanjonoana, boaty voankazo, boaty legioma, fitsangantsanganana, asa-tanana, sombin-javatra very, sns, mety amin'ny fonosana ankapobeny
Materials. Fitaovam-piadiana EPS misy lamina maharitra:
Ny mari-pahaizana retardant F-flame dia nandalo ny mari-pahaizana momba ny laboratoara fitsapana fiarovana (UL) amerikana, ny isa fanamarinana antontan-taratasy dia E360952. Ny mari-pahaizana retardant F-flame dia tokony hisoroka ny fampifangaroana ireo zavatra tsy maharitra mirehitra amin'ny dingan'ny fanodinana, ary tokony homena fiheverana manokana ny tsy fampifangaroana ny EPS mahazatra. Ireo fomba fanodinana tsy mety ireo dia hampihena ny fahombiazan'ny faharetan'ny lelafo. Ny fenitra nasionaly mitaky lelafo F dia misy: foam polystyrene miendrika insulated (GB / T10801.1-2002); fananganana fitaovana sy vokatra mandoro fanasokajiana fampisehoana (GB8624-2012). Mba hahazoana ny fahombiazan'ny faharetan'ny lelafo B2, ny fotoana fahanterana dia tsy maintsy omena ny vokatra voavolavola mba hahafahan'ny mpitsambikam-bary sisa tavela amin'ny vatana foam. Ny vanim-potoana fahanterana dia mamaritra indrindra ny atin'ny mpamokatra foamu, ny hakitroky ny habeny, ny haben'ny vokatra ary ny toe-javatra hafa amin'ny toerana misy rivotra tsara, ireto angon-drakitra manaraka ireto dia atolotra ho an'ny vokatra ravina:
20mm matevina, farafahakeliny herinandro fahanterana 20mm matevina, farafahakeliny roa herinandro fahanterana
50mm matevina, roa herinandro farafahakeliny fahanterana 50mm matevina, farafahakeliny telo herinandro fahanterana
1. Fampisehoana mahatanty ny lelafo;
2. Hafainganana haingana alohan'ny famoahana;
3. Ny habetsaky ny akora dia manana haben'ny sombin-javatra mitovy ary manana volo tsara ny vakana vita amin'ny volo.
4. Ny sakany fandidiana malalaka, mety amin'ny milina fanaovana lovia mandeha ho azy sy manual;
5. Ny vakana vita amin'ny foamed dia manana sela marevaka sy mitovy, ary ny fisehoan'ny vokatra dia malama sy fisaka;
6. Ny vokatra dia manana fahamarinan-toerana tsara, firaiketam-po tsara, henjana tsara ary tanjaka avo;
7. Ny tahan'ny fanitarana indray mandeha dia 35-75;
8. Mety amin'ny fitaovana fananganana B2 mahazatra.
Kilasy F F-101 1.30-1.60 70-90 Fitaovana fananganana, insulation termal ary fonosana seramika elektrika
Previous: Fanampian-danja amin'ny lanjany
Manaraka: Sakana ICF